Maitiro ekudzoreredza akadzimwa mafoto pa iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekudzoreredza akadzimwa mafoto pane iPhone, iPad kana iPod Kubata
Ignacio Sala | | iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kana tichigara tichishandisa yedu iPhone kana iPad kutora mifananidzo, zvinowanzoitika kuti gare gare tinoda kuona kuti macaptitions atakatora ave sei. Pane dzakawanda nguva, mushure mekuona mhedzisiro, isu tinowanzoenderera kudzima iwo mafoto atisina kufarira. Pane dzimwe nguva isu tinomanikidzwa kuti tidzime mapikicha nemavhidhiyo kubva kune yedu kifaa Nekuda kwekushomeka kwekuchengetera pane kwedu kifaa, chimwe chinhu chinogara chichiita kuti isu tirasikirwe yakakosha pikicha kana vhidhiyo munzira. Muzviitiko izvi, zvinogara zvichikurudzirwa kudzima iwo mutambo unoshamisa watinogona kukurumidza kudzoreredza kana tasvika kumba panzvimbo yekuchenesa reel yedu. Asi handicho chete chinangwa.
1 Nei zvichikosha kudzima zvinoshandiswa kana mitambo panzvimbo yemifananidzo?
2 Maitiro Ekudzoreredza Akadzimwa Mapikicha uye Mavhidhiyo pane iPhone kana iPad
3 Tora zvese zvirimo mufaira rakadzimwa
4 Tora Zvadzimwa Mifananidzo kubva kuICloud Photo Raibhurari
5 Delete akafananidzwa mafoto
6 Kurumidza kuwana nzvimbo pane yedu kifaa nekubvisa mapikicha nemavhidhiyo
7 Maitiro Ekudzoreredza Mapikicha kubva ku iPhone pasina Backup
8 Maitiro ekudzoreredza mafoto kubva kune yakadzoreredzwa iPhone
9 Nzira kudzoreza mifananidzo kubva iPhone
9.1 Neiyo Mifananidzo app (Mac)
9.2 Neye Image Capture application (Mac)
9.3 Kuwana iwo mudziyo (Windows PC)
9.4 Ndiwana Image (Windows PC)
Nei zvichikosha kudzima zvinoshandiswa kana mitambo panzvimbo yemifananidzo?
Pese patinodzima pikicha kana vhidhiyo yatakatora pane yedu kifaa, izvi zvinhu hadzina kubviswa zvachose kubva pachigadzirwa chedu kusvikira mazuva makumi matatu apfuura. Munguva yese iyi yenguva yenguva, iyo mifananidzo uye mavhidhiyo atakabvisa anochengetwa mufaira pane yedu reel inonzi Yadzimwa.
Ramba uchifunga kuti iOS inongochengeta mune ino folda zvese zvemukati zvakabviswa mumazuva makumi matatu apfuura, inopfuura nguva yakaringana yekukwanisa kudzoreredza iwo mafoto kana mavhidhiyo atakafunga kuti takarasa kana kuti takabvisa netsaona.
Kana isu tikashandisa iyo iCloud Photo Library, sevhisi iyo inotitendera isu otomatiki chengeta ese iCloud raibhurari Kuti uwane mapikicha uye mavhidhiyo kubva kune edu ese madhizainesi ane hukama neakafanana account, tinogona zvakare nyore kupora mifananidzo nemavhidhiyo atakambobvisa mumazuva makumi matatu apfuura.
Maitiro Ekudzoreredza Akadzimwa Mapikicha uye Mavhidhiyo pane iPhone kana iPad
Tora zvifananidzo kana mavhidhiyo akambodzimwa maitiro akareruka izvo hazvidi ruzivo rwakakura. Pano tinokuratidza maitiro ekuzviita.
Kutanga tinoenda kunyorera Mifananidzo.
Wobva wadzvanya pane sarudzo Albums iri pazasi kwekona.
Iye zvino tinofanirwa kutsvaga dambarefu rakanzi Kubviswa, aripi mapikicha nemavhidhiyo akabviswa mumazuva makumi matatu apfuura.
Pane imwe nguva mukati meiyi albha, tinogona kuona mifananidzo nemavhidhiyo zvatichangobva kudzima. Mumufananidzo wega wega uye vhidhiyo tinogona kuona mazuva asara atinoda kuti tikwanise kudzoreredza iyo mifananidzo kana mifananidzo iri mubvunzo. Iwo mafaera matsva ari kumusoro nepo mafaira ekare ari pazasi.
Kudzoreredza chairo mufananidzo kana pikicha, isu tinongofanirwa kudaro tora pa Sarudza, iri mukona yekumusoro kurudyi, sarudza mafaera ese atinoda kupora uye pakupedzisira tinya nezve Kudzorera sarudzo, iri mukona yezasi yekurudyi.
Kana mafaera ese akadzorerwa, mifananidzo kana mavhidhiyo zvadzoserwa, vachasangana zvakare mualbum Reel, kubva kwavakange vabviswa.
Tora zvese zvirimo mufaira rakadzimwa
Kana pane kutsiva mapikicha akarasika kana mavhidhiyo rimwe nerimwe, tinoda dzosera zvese zvakachengetwa izvo zvatakabvisa isu tinofanirwa kuenda kuAl Deleted album uye tinya paHedha. Ipapo isu hatifanire kusarudza chero chifananidzo kana vhidhiyo, isu tinongofanirwa kubaya pane sarudzo inoonekwa pazasi uye inonzi Regedza zvese. Mifananidzo yese yakabviswa uye mavhidhiyo zvichave zviripo zvakare muKamera Roll album.
Tora Zvadzimwa Mifananidzo kubva kuICloud Photo Raibhurari
Kana isu tikamutsa iyo iCloud Photo Library, iyo mifanidzo iyo yatinodzima kubva kune yedu reel ichave iri mukati mezvadzimwa zvinhu zveedu Photo Library, saka isu ticha fanirwa chete enda kune iyo Yadzimwa folda kuzvitora zvakare.
Delete akafananidzwa mafoto
Pane dzakawanda nguva kana tiri vateveri vekutora mifananidzo uye tichida kuchengeta yega yega yega yakarongedzwa mumaalbum akasiyana, tinogona kuzvifananidza kubva kuMac yedu kana PC kuti tigare tinavo varipo pane yedu iPhone, iPad. o iPod Kubata Kana tichida kudzima chero ipi yemifananidzo iyi, tinofanira kuzviita takananga mufolda iri paMac kana PC pavakachengetwa. Kana dzangove dzadzimwa, isu tinofanirwa kuyananisa maalbham zvakare kuitira kuti abviswe otomatiki kubva pane yedu kifaa.
Kurumidza kuwana nzvimbo pane yedu kifaa nekubvisa mapikicha nemavhidhiyo
Sezvandambotaura kare nguva dzese dzatinobvisa chifananidzo kana vhidhiyo kubva kuchinhu chedu, hatisi kungoerekana tawana nzvimbo mairiPanzvimbo iyoyo, zvese izvo zvemukati zvinofambiswa zvakanangana neRakadzimwa dhaireni kwemazuva makumi matatu kuitira kuti rigone kudzoswazve nguva iyoyo isati yapfuura.
Asi kana isu tichida kukurumidza kudzoreredza nzvimbo pane yedu kifaa uye isu tisisina mafoto kana mavhidhiyo ekudzima, isu tinofanira kuenderera mberi bvisa zvese zvirimo kubva muaccount Deleted kukwanisa kudzoreredza yese nzvimbo ivo yavanogara.
Maitiro Ekudzoreredza Mapikicha kubva ku iPhone pasina Backup
Kubva kuActualidad iPhone nguva dzose tinokurudzira kutsigira nguva dzose kuitira kutitadzisa kurasikirwa nemifananidzo yese nemavhidhiyo atakachengeta pane yedu kifaa. Kana isu tisina iyo ICloud Photo Raibhurari yakamisikidzwa, kana Mifananidzo yangu mukutenderera, zvinoita zvisingaite kudzoreredza chero mhando yeruzivo yatakachengetera mukati
Kana isu tisingawanzo batanidza yedu iPhone kana iPad kune komputa, zvinowanzoitika kuti hatina makopi ekuchengetedza paPC yedu kana Mac kuti tikwanise kuve nekopi yezvose zvirimo zve iPhone yedu kana iPad kana chero chikonzero isu tinorasikirwa zvese zvemukati zvakafanana. Kana zvisinei nenjodzi yatinotambura isu tisingaite backup makopi paPC yedu kana Mac nekuda kwehusimbe, zvakanakisa zvatingaite kushandisa imwe yegore yekuchengetedza masevhisi izvo zvinotibvumidza isu kugadzira kopi yekuchengetedza mukati megore remifananidzo yese nemavhidhiyo atinoita nemuchina wedu.
Parizvino seyakanakisa yemahara sevhisi, kana zvisiri isu tinoda kushandisa iyo iCloud sevhisi iyo Apple inotipa uye iyo inobhadharwa, iyo inotipa isu mukana ndeyeGoogle Mifananidzo. Google Mapikicha kubvira payakapihwa chazove chinhu chakakosha kuita kwemamirioni mazhinji evashandisi veIOS, sezvo ichingoisa yega kopi yemifananidzo yese nemavhidhiyo ayo atinotora nedhidhi yedu. Nenzira iyi tinogona kudzikama kana iPhone yedu ikarasika, kubiwa kana kukuvara pasina mukana wekugadzirisa, nekuti zvese zvirimo zvichawanikwa muakaundi yedu yeGoogle.
Kusiyana nemamwe masevhisi, Google Mifananidzo inochengetedza chaiyo kopi yemifananidzo iyo yatinobata neyedu mudziyo, nekuti inongogadzirisa saizi mifananidzo kana yavo resolution inodarika megapixels gumi nematanhatu. Panyaya yemavhidhiyo akanyorwa mu16k mhando, iyo Google Mifananidzo sevhisi inozo shandura mavhidhiyo ku Full HD, pachinzvimbo chekuachengeta mukugadziriswa kwepakutanga.
Maitiro ekudzoreredza mafoto kubva kune yakadzoreredzwa iPhone
Nguva yega yega Apple painoburitsa vhezheni itsva yeIOS, inogara ichikurudzirwa ita yakachena kuisa kubva pakutanga, kuti urege kudhonza matambudziko ekushanda. Tisati taita kuiswa kutsva uku, iTunes inotizivisa kana tiine kopi yekuchengetedza yezviri mukati mayo, chimwe chinhu chakakosha kana tisingade kurasikirwa neruzivo rwese rwatakachengetera.
Kana tangodzoreredza yedu iPhone kana iPad kubva pakutanga, chishandiso chaicho chinotibvunza kana tichida kumisikidza iyo iPhone sechinhu chitsva kana kana isu tichida kurodha backup iyo yatakamboita. Kana zvakadaro, isu tichafanira zvakare kubatanidza yedu iPhone kana iPad kuTunes uye kurodha backup.
Dambudziko nekushanda uku nderekuti isu tinodzokera mukukwevera matambudziko ese anomhanya izvo zvaive zviripo usati wagadzirisa kana kudzoreredza mudziyo wedu. Kuti tidzivise matambudziko aya, chinhu chakanakisa chatingaite kushandisa maGoogle Mifananidzo kuti tikwanise kuwana mifananidzo nemavhidhiyo ese atakatora munguva yakapfuura nedhizaina iyi kana kubvisa mapikicha nemavhidhiyo kubva ku iPhone kana iPad tisati tavandudza. iyo.uye woidzosera kuti uwiriranise gare gare kuburikidza neTunes kubva backup iyo yatinochengetera zvese zvirimo, kwete kubva kubhegi ratakaita re iPhone yedu, iPad kana iPod Touch.
Asi kana iwe uri mumwe wevashandisi avo iko kunonoka kushanda kweTunes kunoita kuti ushupike uye warega kuishandisa, iwe unofanirwa kuziva kuti ndiyo yega sarudzo inowanikwa kuti ukwanise kuteedzera mafoto kune yedu kifaa. Mumusika tinokwanisa kuwana zvikumbiro zvechitatu-bato senge iMazing, izvo zvinotibvumidza kuti tigadzire makopi ekuchengetedza kuwedzera mukuburitsa nekuisa mukati zvirimo, asi kana tikaedza kuteedzera mifananidzo kuchigadzirwa, iko kunyorera kuchatizivisa kuti Photo Library inoverengwa chete. Nekudaro, kana isu tichigona kuteedzera mavhidhiyo kuchigadzirwa, mavhidhiyo anozoratidzwa muVideo application kwete muPhoto application yechishandiso, sekunge zvichaitika kana tikazviita kuburikidza iTunes.
Nzira kudzoreza mifananidzo kubva iPhone
Kana yedu iPhone yave kuda kusvika muganho wayo unokwanisa uye isu tisina kana nzvimbo yekuchengetera yasara mairi kuti tikwanise kutora mifananidzo nekurekodha mavhidhiyo, danho rinonzwisisika bvisa zvese zvirimo uye chengeta pane rakaparadzana dhiraidhi, kuitira kuti iwe ugare uchiwana icho. Kubvisa zvirimo tinogona kuzviita nenzira dzakasiyana.
Neiyo Mifananidzo app (Mac)
Iyo yekushandisa Mifananidzo, ingave nyowani kuOS X, inotibvumidza kurumidza kuwana mifananidzo yese iyo yatakachengeta pane yedu iPhone, iPad kana iPod Kubata pese patinobatanidza mudziyo wedu kuMac.Kubva kuishandiswo pachayo tinokwanisa kuronga mifananidzo, kuitumira, kudzima uye kuita kopi yekuchengetedza paMac yedu kuti gare gare ichengetedze yekunze backup disk.
Neye Image Capture application (Mac)
Ini pachangu, handisati ndambokwanisa kushamwaridzana neApp Photos,Ini ndinofunga yakaoma kubata uye isinganzwisisike zvachose, chimwe chinhu chisina kushandiswa naApple. Panzvimbo iyoyo, pese pandinenge ndichida kuchenesa mudziyo wangu, ndinoshandisa iyo Image Capture basa, iro rinokutendera kuti uburitse mafoto ese andakachengeta pazvishandiso zvangu. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kusarudza chishandiso kubva kwatinoda kudzitora nekuzvuzvurudzira kufaira kwatinenge tichizochengeta.
Kuwana iwo mudziyo (Windows PC)
Iyo Photos application haina kuwanikwa yeWindows, saka isu tinofanirwa kutendeukira kune dzimwe nzira kuti titore zvese zvirimo zvatakachengeta pane yedu iPhone kana iPad. Iyi ingave iri nzira iri nyore kwazvo yekubvisa mapikicha nemavhidhiyo atinawo pachigadzirwa chedu, nekuti isu tinongofanirwa kuzvibatanidza kuWindows PC yedu uye pinda mumafaira akasiyana uko iyo iPhone, iPad kana iPod Touch inochengeta ese mafoto uye mavhidhiyo atino tora pavari. Kamwe mukati memafaira akasiyana uko mafaera atinoda kuteedzera ari, isu tinongofanirwa kuvadhonza kufaira kwatinoda kuchengeta zvirimo.
Ndiwana Image (Windows PC)
Zvichienderana neshanduro yeWindows yatiri kushandisa, zvingangoita kuti basa iri rakadaidzwa zvakasiyana. Nguva dzese dzatinobatanidza yedu iPhone, iPad kana iPod Kubata, Windows inotiratidza meseji nesarudzo dzese dziripo. Pakati peavo vese vanoonekwa, tinofanirwa kusarudza iyo inotibvumidza kuwana kana kutora mifananidzo yese yatinayo pachigadzirwa.
Tevere, isu tinofanirwa kusarudza dhairekodha yekuenda kwatinoda kuzvichengeta. Kamwe kubatwa kwaitwa, isu tichaenderera nekutamisa iyo folda kune yekunze hard drive, kuchengetedza mifananidzo yatakaita needu iPhone, iPad kana iPod Touch yakachengeteka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzoreredza akadzimwa mafoto pane iPhone, iPad kana iPod Kubata
usataure kuti iphoe mushure mekunge mumwe munhu akamanikidza kiinura iphone nechisimba kuti ibore mushure mekuedza gumi kwakundikana zviri nyore kudzoreredza mafaera ekuwedzera kupi kana iyo fbi ndiko kuti, hapana chishandiso kana mac yakachengeteka senge munhu ari icho zviri nyore kutora iro ruzivo iwo mafaera anochengetwa mufaera rekuchengetedza sebhaakapp ndozvazvinonzi mune windows cluster ndosaka hard disk kana chip kana flash isingakwanise kushandisa ndangariro dzese kana munhu akatenga diski 10g chete iyo inopa inowanikwa kune mushandisi 80 zvimwe kana zvishoma kana mumwe munhu atozviziva izvi ivo vanoedza kuita imwe nzira saka hapana munhu ane chokwadi nezve chero chinhu uye hapana munhu nekuti ramangwana nerufu zvinogara zvichikunda
Pindura kuna culon
? Hapana kana chandakaziva mudiwa
Zvakanaka kumagumo hongu, vakadzi vanogara vachikunda
Mukuru mupiro «culon». Ndatenda ok ase
Isabella mendes akadaro
Mhoro! Ini ndakadzima mapikicha angu ese nekukanganisa uye handina kukwanisa kudzoreredza neimwe nzira. Mukupedzisira ndakashandisa FoneLab, kubva kuAiseesoft uye zvaive zvakanaka kwandiri.
Pindura kuna Isabella Mendes
Leonardo Gomez akadaro
"Culon", ndinokutendai zvikuru nekutaura kwenyu, mushure mekundiverengera chokwadi ndechekuti ndakachiedza uye chakashanda zvakanakisa uye izvozvi mafaera angu ese apora !!
Pindura kuna Leonardo Gómez
Miguel Pacheco akadaro
Ndatenda chaizvo Isabella !! Ini ndakazviedzawo mushure mekuyedza mamwe mapurogiramu uye FoneLab yakandishandira zvakanyanya !!
Pindura Miguel Pacheco
Nyowani WhatsApp yekuvandudza inoratidza mabasa atovepo
Apple Inovhura Indian Leasing Zvirongwa zve iPhone SE